Global Aawaj | » कता हराए ३३ सय जना ? कता हराए ३३ सय जना ? – Global Aawaj
आयोग बल्ल २ हजार १ सय उजुरीको अनुसन्धानमा जुटेको छ। प्रदेश विभाजन गर्दै छानबिन सुरु भइरहेको छ। आयोग टोली उजुरी अनुसन्धानका क्रममा दसैंलगत्तै सबैभन्दा बढी बेपत्ता रहेको जिल्ला बर्दिया पुगेर फर्किएको छ। आयोग सचिव कृष्णजीवी घिमिरे र सदस्य डा। गंगाधर अधिकारी संलग्न टोली बर्दिया गएको थियो। त्यसलगत्तै टोली कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाको अनुसन्धानमा निस्किएको छ। स्थलगत विस्तृत अनुसन्धानका लागि टोली खटिएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ।
टोलीले मंसिर ८ गतेदेखि पुस पहिलो सातासम्म १० जिल्लामा अनुसन्धान गर्नेछ। कालिकोट र रुकुम पूर्वमा आयोग सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारी, जुम्ला र रुकुम पश्चिममा आयोग सदस्य डा गंगाधर अधिकारी, मुगु र दार्चुलामा आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंह, बझाङ, बाजुरा, हुम्ला र डोल्पामा आयोग सदस्य सरिता थापा नेतृत्वको टोली खटाइएको छ। अध्यक्ष सुवेदी र सचिव घिमिरेसमेतको टोली सम्भव भएसम्म विस्तृत अनुसन्धान चालु रहेका सबै जिल्ला जाने तयारी छ। देशभरका स्थानीय तह र प्रहरी कार्यालयमा यकिन गरी सर्जमिन मुचुल्का पठाउन नमुनासमेत दिएर पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले लकडाउन सुरु हुनुअघि सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पाबाटै बेपत्ता व्यक्तिको विस्तृत छानबिन प्रारम्भ गरेको थियो। उजुरीकर्ता भेट्ने, पीडितबाट कागज गराउने, घटनाको वस्तुस्थिति खुलाउन लगाउने, साक्षी बुझ्ने, वकपत्र गराउने, प्रत्यक्षदर्शी बुझ्ने, सहयोगी कागजात संकलन गर्ने, बेपत्ताको सर्जमिन गर्ने तथा पीडितसँग सार्वजनिक छलफल गर्ने तयारीमा आयोग छ। आवश्यकताअनुुसार आधिकारिक विज्ञमार्फत बेपत्ताको ‘एन्टिमाटम’, ‘पोस्टमार्टम’, ‘डीएनए’ गरेर प्रमाणित गर्ने कामसमेत आयोगले गर्न सक्छ। कसैलाई बेपत्ता पारिनुअघिका र अन्तिम अवस्थाको शारीरिक स्थिति, घटनाको फेहरिस्त र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न आरोपित व्यक्तिको विवरण पनि संकलन गरिने भएको छ।
आयोग टोलीले सेनाको भैरवनाथ गण र शिवपुरी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको छ। माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि आस्थाका बन्दी राखिएको स्थान भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बेपत्ता पारिएको उजुरीका आधारमा निरीक्षण गरिएको थियो। सेनाको सुरक्षाभित्र रहेको शिवपुरी क्षेत्र द्वन्द्वकालका घटनासँग जोडिँदै आएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।